I-Blue Tie Dye Maxi Dress - Ama-Buddhatrends
Umbala we-Blue Tie Dye Maxi
$ 82.80 $ 92.00 Ugcina i-10% ($ 9.20)
I-Blue Stripes / L I-Blue Stripes / XL I-Blue Tie Dye / L I-Blue Tie Dye / i-XL
Indwangu ye-Blue Tie Dye Maxi iyigqoko elimangalisayo labesifazane abahle kakhulu abathanda amaphethini amaningi ekuphileni kwabo kwansuku zonke. Lesi sigqoko sifaneleke kakhulu kwabesifazane abafuna ukuthola okungcono kakhulu imali yabo ngenkathi futhi bebukeka kahle kakhulu.
I-Blue Tie ne-Dye Maxi Dress iyenziwe ngekotini nelineni lelineni futhi isendwangu sinomthofu, sincane futhi ayinwebeki, okwenza kube lula futhi kugqoke kuzo zonke izinhlobo zezulu nezifudumele. I-neckline iyindilinga futhi yenziwe ngesitayela se-sleeve, eyenza ibe yindawo efanelekile yokuhamba kuyo. Itholakala ngosayizi Omkhulu no-X-Large okwenza kube yinto ebonakalayo kubantu besifazane abahlukahlukene nobukhulu obuhlukahlukene futhi ifika ne-blue and white tie namaphethini wedayi.
Usayizi: L, i-XL
Okukhulu:Ubude: 123 cm, iBust: 152c m, Umkhono: 7cm, Vula: 150cm Cuff: 40cm
I-XL: Ubude be-128 cm, iBust: 156 m, Sleeve: 7cm Hamba: 154cm Cuff: 42cm